8k vs 4k vs 1080p vhidhiyo: ndeupi musiyano uye ndeupi resolution waunofanira kunyora mukati?
Kuru Nhau & Ongororo 8K vs 4K vs 1080p vhidhiyo: ndeupi musiyano uye ndeupi resolution waunofanira kunyora mukati?
8K vs 4K vs 1080p vhidhiyo: ndeupi musiyano uye ndeupi resolution waunofanira kunyora mukati?
Tekinoroji yemafoni yekufungidzira inoramba ichiita zvirinani, uye nemhando yevhidhiyo mafoni edu anogona kurekodha. Kugadziriswa, kunyanya, kwasvika matanho matsva, ane mafoni epamusoro anokwanisa kupfura kunyangwe 8K vhidhiyo kana 1080p kana 4K isina kunyatso tsanangurwa. Kugadziriswa kwepamusoro kunoreva mamwe mapikisheni muvhidhiyo yako, iyo inoshandura kune zvirinani ruzivo uye kupinza.
Asi ndeupi musiyano uripo pakati pe1080p, 4K, uye 8K resolution yevhidhiyo? Iwe une izvi zvingasarudzwa pafoni yako, asi ndeipi resolution yevhidhiyo yaunofanira kusarudza? Rega titsanangure.
Iwe unoona here musiyano uripo pakati pe1080p, 4K, uye 8K?
Kugadziriswa kwepamusoro kuri nani pane kwakakwira FPS?
Ndechipi chisarudzo chandinofanira kusarudza?
Ngatitangei nezvakakosha.Anorevei mazwi ekuti 1080p, 4K, uye 8K kana zvasvika pavhidhiyo?
1080p- inozivikanwawo seYakazara HD, 1080p vhidhiyo resolution inopa saizi yemifananidzo ye1920 ne1080 pixels. Mazhinji epakati-renhare mbozha nhasi anouya ne1080p maonerwo, uyezve anoita anodhura maTV, malaptop, uye PC monitors. Iyo ndiyo inonyanya kushandiswa YouTube vhidhiyo resolution nhasi. Mafirimu pane akajairwa Blu Ray discs ane 1080p resolution.
4K kana UHD- aya mazwi maviri anoshandiswa kutsanangura iyo yakafanana vhidhiyo resolution: 3840 ne 2160 pixels. 4K ndiyo resolution yepamusoro inowanika pamasevhisi ekushambadzira seNetflix, Hulu, HBO Max kana Amazon Prime TV. Mazhinji maTV matsva anouya nemasikirini ekugadzirisa uku. Nekudaro, chete mashoma mafoni ane 4K kuratidza akamboburitswa.
8K- chisarudzo chepamusoro-soro chaungawana paTV pamusika chinoshandura kune saizi yemufananidzo we7780 ne 4320 pixels. Icho ichiri chigadziriso chitsva, uye nepo paine mamwe maTV pamusika anoishandisa, izvi zvichiri zvisingawanzo kuwana uye zvinodhura.
Mune dzidziso, resolution yepamusoro inoreva mamwe mapikiseli, uye mamwe mapikisheni anoreva zvimwe zvakawanda zvakatorwa muvhidhiyo yako. Kuenzaniswa ne1080p, vhidhiyo ye4K ine mapikisheni akawanda zvakapetwa kana, uye 8K ine gumi nematanhatu yakawanda yevhidhiyo yakadzama.
Kuti tione musiyano uyu, isu takashandisa yedu Samsung Galaxy S21 Ultra kutora mavhidhiyo matatu ezvakaitika zvakafanana chiitiko - imwe mu1080p, imwe mu4K, uye imwe musarudzo 8K. Ichi ndicho chiitiko chiri mubvunzo:
Ipapo takaburitsa mafuremu rimwechete rekuenzanisa-ne-padivi uye takaswededza munzvimbo yakakwenenzverwa. Heano & apos; mutsauko:
< Full HD 1080p crop 4K Ultra HD chirimwa>
Musiyano wehunhu pakati pe1080p ne4Ki wakakura - kusvika padanho rekuti 1080p ratidziro isu tinonetseka kusiyanisa zvatakatarisa isu & apos. Iine 4K, zvinhu zviri nani. Mufananidzo wacho wakanyanya kupinza, asi zvidiki zvidiki zvichiri kuoneka zvakajeka.
< 4K Ultra HD crop 8K 100% chirimwa>
Apa ndipo panowana zvinhu zvinonakidza. Muchirimwa che4K, hazviite kuti uverenge zvinyorwa zvakanyorwa pamushini, nepo uri muna 8K, unogona kuverenga zvimwe zvacho. Kuenzaniswa ne4K, zvinoita sekunge pane musiyano mukuru zvakare.
Asi iwe uri kuona musiyano uripo pakati pe1080p, 4K, uye 8K?
Nehunyanzvi, pane musiyano mukuru pakati pezvisarudzo zvakasiyana. Asi muhupenyu chaihwo, zvichave zviri pedyo nekusagone kuona mutsauko pafoni yako pakati pe4K ne8K. Kana iri ye1080p, kana iwe uine foni ine yakakura kudarika 6 inches inoratidzira, iine angangoita FHD + resolution iwe uchaona misiyano uchienzanisa ne4K, neyekupedzisira ichikupa iwe zvinowoneka zvizere. Asi kana foni yako isiri & apos; iyo yakakura pane ekuratidzira specs, iwe haugone kusiyanisa zvisarudzo zviviri izvi kubva kune mumwe nemumwe.
Kana iwe uchifarira kana izvozvo zvikagara zvakafanana nezvikuru skrini, saka mhinduro iri kwete. Izvo zvese zvinoenderana nesarudzo yako TV kana monitoreti ine, saka kana iri 1080p, iwe hauzowone musiyano kana uchitamba 4K kana 8K, kunze kwekunge iwe watarisa mukati. Kana iwe uine 1080p TV kana monita, hauna kuhwina & apos; t kukwanisa kuona mutsauko pakati pezvisarudzo zvitatu. Asi rimwe zuva uchatenga imwe nyowani, uye mikana ndeyekuti ichave iri 4K, sezvo ichi chave chijairika mumaTV uye kuongorora. Izvo zvinoita 4K resolution iri nani kutora bhaisikopo kana iwe wakamboronga kuona iwo mavhidhiyo paTV kana PC mutariri.
Muna 2021, mafoni emafoni ane zvakawanda zvekuchengetedza kupfuura nakare kose. Kashoma kuona iyo smartphone ine isingasviki 64GB yekuchengetedza. Uku kuwedzera kwesimba kunoreva zvakare kuti makuru mavhidhiyo ari nyore kuchengeta pane yako smartphone.
Ndeipi nzvimbo yakawanda masarudzo akasiyana anotora pane yako smartphone? Isu takaedza maviri emafoni akakurumbira mu2021 uye isu tine mhinduro.
Samsung Galaxy S21 Ultra, MB yakatorwa paminiti yevhidhiyo:
H.264 / paminiti
HEVC - H.265 / paminiti
8K, 24fps N / A. 594MB
iPhone 12 Pro Max, MB inotorwa paminiti yevhidhiyo:
1080p, 30fps 117MB
4K, 60fps N / A. 392MB
Uine 128GB yekuchengetera, iwe unogona kunyora kwakatenderedza maawa gumi nemaviri e1080p 30fps kana maawa matanhatu e4K 30fps vhidhiyo vhidhiyo muH.264 fomati. Kana iwe ukasarudza iyo Yakakwira-Kubudirira H.265 imwe, iwe unozokwanisa kurekodha kutenderedza maawa makumi matatu e1080p 30fps, maawa gumi nemana e4k 30fps uye maawa matatu e8K 24fps vhidhiyo vhidhiyo .. Dzese idzi nhare dzinouya ne128GB yekuchengetedza pane yavo base vhezheni, saka zvakachengeteka kutaura kuti kunyangwe ukasarudza resolution yakakwira kupfuura 1080p, uchave uine yakawanda yekuchengetedza yekushanda nayo.
30fps vs 60fps. Zvinorevei?
FPS inomirira mafuremu pasekondi. Kana iwe ukasarudza yakakwira fps vhidhiyo yekumisikidza, foni yako inorekodha mamwe mafuremu pasekondi, zvinozozoita kuti vhidhiyo iite seyakareruka, asi vhidhiyo saizi saizi ichave yakakura.
Heino muyenzaniso watakagadzira pamberi peiyo 30fps vhidhiyo yakanyorwa ne smartphone:
Sezvauri kuona, 30fps inotaridzika zvakanaka uye yakavimbika. Iyi fomati yevhidhiyo inotora yakanyanya kuderera nzvimbo kupfuura iyo 60fps imwe, asi zvakare inouya seisina kutsetseka, sezvo mutsauko wefuremu mwero wakakura.
Iyo 60fps vhidhiyo sampuro inotaridzika zvakanaka zvakare, asi kuzunza kunoonekwa zvakanyanya mune iyi fomati. Zvinotora zvakare nzvimbo yakawanda. Pakupera kwezuva zvese zvinoenderana nezvamunotora firimu. Kana iwe uri kutora zvinhu zvimisikidzo iwe zvausingadi & apos; haudi kunyatsoda 60fps, asi kana iwe uri kutora imwe chiitiko semutambo wemitambo iyo yakakwira zororo mwero inove inoruramiswa.
Asi iwe unotoda 60fps? Kune akawanda kesi, 30fps inopfuura zvakakwana. Mazhinji mavhidhiyo ari pa internet anodururwa pa30fps. Mazhinji materevhizheni eTV anotepfenyura panguva imwecheteyo framu. Iyo yepamusoro, 60 mafuremu-per-yechipiri marongero isarudzo yakanaka kana iwe uri kurekodha zvinokurumidza kufamba-senge semitambo, asi haina kunyanyo kukodzera kune yakaderera-mwenje mamiriro. Iyo 60fps kumisikidza zvakare inokupa iwe sarudzo yekudzora vhidhiyo pasi kusvika ku0.5x yehunyanzvi mhedzisiro pasina vhidhiyo yekukakama.
Ehe, resolution yepamusoro inogara iri nani kana uchida kusarudza pakati pemavhidhiyo maviri aya. Kana sarudzo iri pakati pe1080p pa60fps uye 4K pa30fps, uchave zvirinani nesarudzo yechipiri nekuti, zvinhu zvese zvichitariswa, hwakawanda humbowo hweramangwana. Kana iwe urikusarudza pakati peakasiyana maFPS marongero pane imwechete resolution, saka sarudzo inoenderana nechinzvimbo chaunoda kunyora kana kuti yakawanda sei chengeto yawakasiya.
Sarudza 1080p kana iwe uine foni ine isingasviki 128GB yekuchengetedza. Kune mazhinji masocial media mapuratifomu, senge Instagram, Twitter uye Facebook, 1080p mavhidhiyo anopfuura zvakakwana.
Sarudza 4K kana uine 128GB yekuchengetedza kana zvimwe. YeYouTube, iyo 4K vhidhiyo yekumisikidza zvirokwazvo ndiyo yakanyanya kunaka kusarudza nekuti ndiyo yakanakisa kuyananisa pakati pehunhu uye saizi. Zvekutarisa pane yakakura TV kana komputa screen, 4K iri zvakare zvakare yakanyanya kunaka sarudzo yezvazvino kuratidzwa. Musika uzere nezvakasiyana zvigadzirwa zve4K screen, uye kunyangwe kana uchinge usina chigadzirwa nechisarudzo ichi, ungangotenga imwe munguva pfupi.
Sarudza 8K kana iwe uchigara uchirovera kukwana, uchida vhidhiyo yakanakisa maererano neruzivo, uye uine angangoita 256GB yekuchengetedza. Asi ramba uchifunga kuti 8K zvinyorwa zvinogona kubuda zvine shakier, zvinoreva kuti ungangoda kushandisa katatu, kunyanya kana uchironga kushandisa vhidhiyo zvinehunyanzvi. Zvakare, mavhidhiyo mune 8K resolution anotora yakawanda nzvimbo, uye mamwe emafoni efoni anokwanisa kunyora 8K ane dambudziko nekupisa.
Iyo Samsung Galaxy S21 Ultra uye iyo iPhone 12 Pro Max
iphone 12 pro max padivi sensor
lg v20 vs s7 kumucheto kamera
Apple iPhone X kushandisa Kurara / Wake / Simba bhatani kune & apos; batidza 'Siri
Tora mifananidzo inoshamisa ine yako iPhone 7 Plus: mune-kwakadzika gwara rePortrait Mode
Unogona achiri kutenga iyo iPhone 7 uye 7 Plus kubva kuApple & apos; s online clearance chitoro
Software Kuedzwa uye Akasiyana Kufunga Mhando
Inouya yekuvandudza ichaita Star Wars: Knights of the Old Republic ive yepasirose iOS app
Muka uye hwema izvo izvo Dombo riri kubika neRock Clock alarm app!
Android Auto isiri kushanda neyako mota redhiyo? Pano & apos; s kugadzirisa ...
Maitiro ekuti utarise QR kodhi ine Samsung Galaxy Note 20 uye Cherekedza 20 Ultra